एमाले महाधिवेशनमा भाजपाका दुई नेता नेपाल आउँदै! | अपन जनकपुर
एमाले महाधिवेशनमा भाजपाका दुई नेता नेपाल आउँदै!
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा छिमेकी मुलुक भारतको भारतीय जनता पार्टीका (भाजपा) दुई नेता नेपाल आउने भएका छन् ।
महाधिवेशनका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निम्तोलाई स्वीकार गर्दै भाजपाका पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री डा. हर्ष वर्धन र भाजपाका राष्ट्रिय सचिव हरिश द्विवेदी नेपाल आउने कार्यक्रम तय भएको एमालेले जनाएको छ ।
एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भोली मंसिर १० गते शुक्रबारदेखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुने भएको छ । महाधिवेशनको उद्घाटन नारायणी नदी किनार हुने भएको छ भने बन्दसत्र सौराहास्थित होटल सेभेन स्टारमा हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।